Proverbe Ady tsy tra-mahahery vava. [Cousins 1885 #11]
Proverbe Akohovavy naneno : lozain’ ny navoaky ny vavany. [Cousins 1885 #68]
Proverbe Ala-faditr’ ilay moana : am-po no mametsivetsy. [Veyrières 1913 #5683, Cousins 1885 #84]
Ala-faditr’ ilay moana : ny vava tsy miloaka, fa ao am-po no manisaisa. [Cousins 1885 #85]
Proverbe Am-bavany, malefaka; am-pony, tsy tia. [Cousins 1885 #123, Nicol 1935 #195]
Ataovy fihavanam-bava sy tanana : raha marary ny tanana, dia mitsoka ny vava; ary raha marary ny vava, dia misafo ny tanana. [Cousins 1885 #304, Veyrières 1913]
Proverbe Avoavoin' ny vavany, fa aetrietrin' ny sainy. [Rinara 1974 #356, Cousins 1885 #328]
Avoko no nasaina nohaniny, ka soihalondona no nataony be am-bava. [Cousins 1885 #329]
Proverbe Aza manao lelan' omby : sady hitsabaka am-bava no hitsabaka an' orona. [Veyrières 1913 #4978, Cousins 1885 #479]
Proverbe Aza manao vavan' ny maty an-drano. [Cousins 1885 #544]
Proverbe Aza mivavavava tsy mahay vava harona. [Cousins 1885 #681]
Aza tampenam-bava, ohatra ny batera. [Cousins 1885]
Proverbe Azo amy ny vavany, sahala amy ny samoim-boatavo. [Cousins 1885 #723]
Proverbe Azoko amy ny vavany, hoy ilay nanjono toho. [Cousins 1885 #725]
Proverbe Didian’ ny antsy no misy romoromo, fa ny didian’ ny vava tsy mba misy romoromo. [Cousins 1885 #840]
Proverbe Fakana amboan--tSakalava: tanana amy ny vavany ihany vao mety mihinana. [Cousins 1885]
Kofafam-bolo : manadio ny lohan' ny sasany, nefa ny vavan' ny tena feno fako. [Veyrières 1913 #6473, Cousins 1885 #1281]
Proverbe Farihy tsy misy vodiny, ony tsy misy vavany. [Veyrières 1913 #5751, Rinara 1974 #1126, Cousins 1885 #939]
Firain’ ny vava fito saha, firain’ ny harem-boan-tondro ; ny ataon’ ny vava tsy araka ny aina. [Cousins 1885 #962]
Fisa-bava, toy ny vorombazaha. [Cousins 1885 #964]
Hanina voaray maty afo : ny vava tsy mba maizina. [Veyrières 1913 #4489, Cousins 1885 #1027]
Proverbe Homam--bomanga an-tsena : tsy hisarom-bava menatra ny olona, hisarom-bava ampangain' ny foto-tsofiny. [Rinara 1974 #1370, Cousins 1885 #1094]
Ingahy banga nihinana atodiakoho : ny filemodemoky ny vavany leoko ihany, fa ny fifalihavanjan' ny lelany no tsy tohako. [Veyrières 1913 #1816, Cousins 1885]
Proverbe Lamba somizy natohy loha : ny kibo dia efa namoy, fa vava tsy ratsy no sisa. [Veyrières 1913 #5273, Cousins 1885 #1306]
Proverbe Lanja volan' Ibemahatsindry : ny tsy fenon' ny mizana fenoin' ny vava. [Rinara 1974 #1727, Cousins 1885, Veyrières 1913]
Proverbe Levenan’ ny malahelo: voahevi-bava, fa tsy lasan-karena. [Veyrières 1913 #5854, Cousins 1885 #1367]
Mahay roa ohatra ny lelan’ omby, sady ho ao am-bavany no ho ao an-orony. [Cousins 1885]
Mahasosotra, ohatra ny malahelo misambo--bary : raha vao maka, mitady avo loha ; nony manatitra, manao safo vava. [Cousins 1885]
Malahelo miantsena: ny totohondry no arapaka. [Cousins 1885]
Malahelo miantsena: ny totohondry no asesika am-bava. [Veyrières 1913 #2516, Cousins 1885]
Misalasala, toa vavan' ondrindrano : mitsotra, toa lanton-tsandriny; mikainkona, toa molo-bavany. [Veyrières 1913 #5814, Cousins 1885 #1826]
Proverbe Mananatra zaza tsy nateraka mahabe foto-tsofina. [Cousins 1885, Veyrières 1913]
Proverbe Manao filohan’ Idrako: ny mitranga, am-bavako avokoa. [Rinara 1974 #1992, Cousins 1885 #1535]
Proverbe Milomano miorika, ka manabe vava ny ony. [Cousins 1885 #1791, Houlder 1895]
Milomano mivalana ka manabe vava ny ony. [Cousins 1885 #1792, Houlder 1895]
Misarom-bava tsy mitafy, ohatra ny sinibe. [Cousins 1885, Rinara 1974]
Mitabataba, ohatra ny voanjo am-bavan’ antitra. [Cousins 1885]
Proverbe Mitatatra am--pasika, ka manabe vava ny ony. [Houlder 1895 #1695, Veyrières 1913 #2630, Cousins 1885 #1863]
Proverbe Mivezivezy, tahaka ny tsaramaso am-bavan’ antitra. [Cousins 1885 #1919]
Proverbe Ny alain' ny vavany maningotra ny tenany, ary ny alain' ny lelany maningotra ny lohany. [Cousins 1885 #2142, Rinara 1974]
Proverbe Ny be kibo mahalany hanina; ny mahery miantsena maharovi-damba ; ny mafy sofina mahabe vava. [Veyrières 1913 #1676, Cousins 1885 #2190, Rinara 1974]
Proverbe Ny fo no ho tezitra, ny sofina no mandre teny ratsy. [Cousins 1885 #2239]
Proverbe Ny hanina zaraina mora lany; ny raharaha zaraina mora vita ; ny sakafo lany mahatsara vava. [Cousins 1885 #2249]
Proverbe Ny kibo no be eritreri-dratsy, ka ny vava no mahazo loza. [Houlder 1895 #121, Rinara 1974 #3047, Cousins 1885 #2282]
Proverbe Ny mangataka am-bava leo ihany, fa ny mangata-maso no tsy tanty. [Houlder 1895 #2240, Veyrières 1913 #5124, Cousins 1885]
Proverbe Ny omby singorana amy ny tongony, ny olona singorana amy ny vavany. [Cousins 1885 #2379]
Proverbe Ny tana-manao tsy mahaleo ny vava homana. [Cousins 1885 #2426, Rinara 1974]
Proverbe Ny teny ratsy : adidy, ny vava soa : sakafo. [Rajemisa 1985 #23, Rinara 1974 #3283, Cousins 1885 #2445]
Ny vao mihalohalo ao an-tratrany aza fantatra, ka indrindra fa ny efa aloaky ny vavany. [Cousins 1885 #2467]
Ny vava toy ny voro-damba: mitsiaka etsy, mitsiaka eroa. [Cousins 1885 #2471]
Proverbe Ny vava tsy ambina no ahitan-doza; ny tongo-dava no ahitan-kanina. [Cousins 1885]
Ombilahy tsara feo, ka ny vavany no mahalafo azy. [Houlder 1895]
Ombilahy tsara feo : lafon’ ny vavany ihany. [Cousins 1885]
Raha foin’ ny vava, tsy misy raorao; fa hany raoraon’ izany lainga. [Cousins 1885 #2648]
Proverbe Raha mamazivazy ahy hianao, dia ataoko toy ny fametraka siny, ka ny vavany no ataoko ambany. [Cousins 1885 #2683]
Saro--bary an-tsotro : samy miady fo izay ho am-bavany. [Veyrières 1913 #4591, Cousins 1885]
Tahaka ny vorombazaha: raha mitsilany, fisaka ny tongony; miankohoka, fisaka ny vavany. [Cousins 1885 #2968]
Proverbe Tana-mpamono, mpanambitamby ; vava mpitezitra, mpamalifaly. [Veyrières 1913 #6438, Rinara 1974 #260, Cousins 1885 #2996]
Proverbe Tanora mievina am-paty : sady tsy homba no miharatsy vava. [Cousins 1885 #3018]
Proverbe Tety am-bava: na tsy tiana aza lelafina ihany. [Cousins 1885]
Proverbe Tohatr' akoho : ny vavany no amantarana azy. [Rinara 1974 #4148, Cousins 1885 #3105]
Proverbe Toy ny hety: manam-bava, fa tsy misy kibo hasiana. [Cousins 1885 #3199]
Proverbe Tongotry ny afo, ny rivotra ; vavan' ny adala, ny hendry. [Cousins 1885 #3130, Nicol 1935 #64]
Toram-poana tahaka an--drangahy Andriandambo nolalovan' ny vava basin-dRabevitsika. [Veyrières 1913 #5734, Cousins 1885 #3146]
Proverbe Toto vary maizina : ao am-bava vao mifantina akatatra. [Veyrières 1913 #3760, Cousins 1885 #3154]
Proverbe Trafon-kena ome-mahery : am-bava homana, am-po mieritra. [Cousins 1885 #3263, Nicol 1935 #333]
Tsy banga, tsy rombina, ka tia sarom-bava. [Veyrières 1913 #6465, Cousins 1885 #3342]
Proverbe Tsy leon-toaka am-bavan’ olona hianao, fa ny am-bavanao no mankaleo anao. [Cousins 1885 #3361]
Proverbe Tsy mety raha mahay vava tsy mahay vava harona. [Veyrières 1913 #3624, Rinara 1974 #4599, Cousins 1885]
Proverbe Tsy mety raha tsara vava ririnina, toy ny voalobok’ Ambohidrano. [Cousins 1885 #3493]
Proverbe Voafitaky ny vavany, ohatra ny tobo voajono. [Cousins 1885]
Voatavomenaka nohanim-boalavo: ratsy vava indray alina ihany. [Cousins 1885]
Proverbe Voatavo an-doha voanjo : manan-doha fa tsy manam-bava. [Veyrières 1913 #3630, Rinara 1974 #4996, Cousins 1885 #3710]
Proverbe Voatavo tsy mifandraka : ny loha ananana, fa ny vava hamely tsy misy. [Veyrières 1913 #1546, Cousins 1885 #3713]
Voatelina tsy satry, ohatra ny tavin-kena am-bavan’ antitra. [Cousins 1885, Rinara 1974]
Proverbe Vovòn' alika tsy hery fa tahotra. [Cousins 1885, Houlder 1895, Nicol 1935, Rajemisa 1985]
Proverbe Zato iray alinalina; arivo iray hetsihetsy. [Cousins 1885 #3766]